Antoko Fanorolahy : Manohana an-dRavalomanana -
AccueilSongandinaAntoko Fanorolahy : Manohana an-dRavalomanana
Antoko Fanorolahy : Manohana an-dRavalomanana
Tany ambanivohitra hatrany no sehatra niasan’ny antoko Fanorolahy nanomboka ny taona 1996 niforonany, ka ny fampianarana sy ny fanampiana ireo tantsaha mpamokatra (fizarana zezika sy masomboly) no nilofosany. Ankehitriny naneho ny safidiny ny antoko Fanorolahy amin’ny fanohanana ny kandidà laharana 25, Marc Ravalomanana amin’izao fifidianana filoham-pirenena izao, taorian’ny fitorian’ny birao.
Tsy niova tamin’ny foto-keviny ny antoko Fanorolahy dia ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra, ka ny kandidà Marc Ravalomanana laharana 25 no hitan’ireo mpikambana fa mamaly izany foto-kevitra ijoroan’izy ireo izany. Niainga avy tamin’ny foto-kevitry ny profesora Zafy Albert ny antoko Fanorolahy ny taona 1996. Tsy niandany tamin’iza fa nijanona ho mpiara-dia sy mpiara- miombon’antoka amin’ny tantsaha.
Nahatsapa kosa anefa ireo tantsaha sy ny mpikambana fa manana adidy manoloana izao sampanan-dalana diavin’ny firenena izao, ka nahatonga azy ireo nandray fanapahan-kevitra hanohana ny kandidà laharana faha-25, izay heverin’izy ireo tokoa fa manakaiky izay resaka tontolo ambanvohitra mivelona amin’ny fiompiana sy ny fambolena izay, koa manainga ny mpikambana rehetra indrindra ireo tantsaha hanefa ny adidiny amin’ny faha-7 novambra ho avy izao, araka izao hafatra manaraka izao: “diniho tsara iza ny olona nanampy anareo vahoaka tamin’izy mbola teo amin’ny fitondrana, ny fanamboaran-dalana, vokatra avy amin’ny tantsaha sy ny mpamboly, iza no akaiky kokoa amin’ireo kandidà ireo ndrao hanenina. Ny kandidà laharana faha-25 io ihany no mahafeno ny fepetra”.